Football Khabar » मेस्सीले खोले ‘प्रेम र जीवन’का रोचक किस्सा !
मेस्सीले खोले ‘प्रेम र जीवन’का रोचक किस्सा !
एजेन्सी, जेठ २०
बार्सिलोना तथा लिओनल मेस्सीका धेरैजसो फ्यानलाई उनको प्रेम र पारिवारिक जीवनबारे थाहै हुनुपर्छ । मेस्सी, उनकी श्रीमती एन्टोनेल्ला र तीन छोरालाई फ्यानहरूले निकै रुचाएका छन् । श्रीमती र तीन छोराहरूसँग मेस्सी निकै घुलमिल हुन्छन् । र, उनी आफ्नो परिवारलाई निकै महत्त्व दिने गर्छन् ।
बेला–बेला सामाजिक सन्जालहरूमा मेस्सीले श्रीमती र छोराहरूसँगका निकै रोचक र रमाइला भिडियो तथा तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । जसका कारण मेस्सीकी प्रेमिका÷श्रीमती र छोराहरूलाई फ्यानहरूले पनि निकै फलो गर्ने गर्छन् ।
त्यसो त मेस्सी आफैंले पनि पटक–पटक आफ्ना लागि पहिला परिवार र त्यसपछि मात्रै फुटबल रहने बताउँदै आएका छन् । खासमा मेस्सीको परिवारको भित्री प्रेम कहानी कस्तो होला ? हालसालै एक अन्तर्वार्तामा मेस्सी स्वयंले यसबारे खुलेर बोलेका छन् ।
सो अन्तर्वार्ताक्रममा मेस्सीले परिवार, श्रीमती र छोराहरूको बारेमा बोलेका कुरा जस्ताको तस्तै :
म एक सामान्य मानिस हुँ । अरू मानिसजस्तै मेरो पनि सामान्य परिवार छ । मलाई सामान्य जीवन मन पर्छ ।
सकेसम्म म मेरा छोराहरूलाई आफैं स्कुल लैजान्छु । लिन पनि आफैं जान्छु । उनीहरू मेरा लागि साथीजस्तै छन् ।
स्कुलमा मेरा छोराका सामान्य साथीहरू छन्, जस्तो आमस्कुलमा बालबच्चाले साथी बनाउँछन् ।
मेरा छोराहरू पढ्ने स्कुलको ह्वाट्सएप ग्रुपमा मेरी श्रीमती पनि छन् । अन्य बच्चाका परिवारसँग मेरो पनि राम्रो सम्बन्ध छ । बच्चालाई पुर्याउन–लिन जाँदा थुप्रैसँग मेरो चिनजान भइसकेको छ ।
उनीसँग मैले ११ वर्ष पारिवारिक रूपमा बिताइसकें । त्यसो त हामी सानैबाट एकअर्कालाई जान्दछौं । हामीले बाल्यकाल पनि सँगैसँगै बितायौं ।
जतिबेला हामी बाल्यवस्थामा थियौं, धेरै कुरा मिल्थे । हामी त्यत्तिबेला मायामा भन्दा पनि मित्रतामा थियौं । प्रेम त अलि पछि मात्रै भयो ।
खासमा अहिले सम्झिँदा सँगै खेल्दाखेल्दै हामीबीच प्रेम भएछ । हामी लामो समय प्रेममै रह्यौं । आज हामी खुसी छौं । छोराहरू एकदमै खुसी छन् ।
थियागो अहिले सबै कुरा बुझ्छन् । उनी फुटबल पनि बुझ्छन् । हाम्रो जितमा उनी खुसी हुन्छन्, हार्दा मजत्तिकै दुःखी हुन्छन् । जतिबेला हामी लिभरपुलसँग र कोपा डेल रे हारेका थियौं, उनी निकै दिन मसँग राम्ररी बोलेनन् । उनी अरू बेला पनि हार्दाखेरि केही दिन बोल्दैनन् । म पीडामा हुन्छु भन्ने उनी बुझ्छन् । र, त्यत्तिखेर हारबारे कुरै गर्दैनन् । अलि दिनपछि मात्रै सोध्छन्– त्यो दिन किन हारियो ?
तर, माटेओ सानै छन् । उनले अहिले नै मैले हारेको वा जितेको बझ्दैनन् । उनी म खुसी हुँदा खुसी हुन्छन् । मैले वा मेरो टिमले हारेको उनी अहिले बुझ्दैनन् ।
जतिबेला थियागो जन्मिए, त्यत्तिबेला मलाई लागेको थियो– मेरो परिवारमा खेलको नतिजा भन्दा पनि जीवनका अन्य कुरा प्रमुख हुँदारैछन् ।
हार्दा ज्यादै पीडा हुन्छ । तर, जब हारेको खेलपछि म घर फर्किन्छु । र, म मेरा छोराहरू र श्रीमतीलाई देख्छु– सबै पीडा बिर्सन्छु ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय ड्युटीबाट फर्किएपछि म केही समय परिवार र श्रीमतीसँग बिताउन चाहन्छु । छोराहरूसँग समय बिताउन मलाई मन पर्छ ।
लिभरपुलसँग हार्दाको पीडा अहिले पनि मसँग छ । लगत्तै कोपा हारेपछि मेरो परिवारमा पनि पीडा छ । तर, यस्ता कुरा बिस्तारै पुराना हुँदै जान्छन् । समयले पुराना कुरा छाड्दै नयाँ कुरा दिँदै जान्छ ।
प्रकाशित मिति २० जेष्ठ २०७६, सोमबार ०६:११
लिजेन्ड रिभाल्डो भन्छन्– ‘मेस्सीलाई नबेच्नु बार्सिलोनाको ठूलो गल्ती’